Articles tagged 'zimbabwe christian alliance'
Admit to God you've failed, Mugabe told 26 September 2016 HARARE - Church leaders have appealed to President Robert Mugabe to “admit to God he has failed” and initiate the reconciliation process by opening up dialogue. The clergymen — Ancelimo Magaya, Kudakwashe Makuwe, Useni Sibanda, and Tedious Munemo — made the remarks in an open letter to the 92-...
Churches condemn police brutality 21 August 2016 HARARE - Churches have condemned police brutality and savage beatings of peaceful protesters which they said violated the Constitution. This comes in the wake of Wednesday and Thursday's barbaric attacks on vendors and Tajamuka/Sesjikile members who were protesting against the introduction of ...
Churches plot anti-Mugabe protest 16 August 2016 HARARE - Church organisations are plotting an anti-President Robert Mugabe protest tomorrow in Harare. The organisations — Zimbabwe Devine Destiny (ZDD), Prayer Network of Zimbabwe, Zimbabwe Pastors Fellowship, Christian Voice and Zimbabwe Christian Alliance — said they will proceed with the d...
Churches call for national dialogue 14 July 2016 HARARE - Churches have called for national dialogue between government and various stakeholders and implored the State to listen to the complaints raised by long- suffering Zimbabweans if it is to save the country from total implosion. A host of religious groups such as Zimbabwe Council of Chu...